23rd June 2017 By Saxadoon
Marka laga hadlayo ama wax laga qoraayo arrimaha caafimaadka la xidhiidha waxa aad loo isticmaalaa erayo badan oo ku kala duwan xagga macnaha, ujeeddada iyo cilmi ahaanba. Tusaale ahaan waxa ka mid ah erayadaas la is dhex dhigo xanuun iyo cudur oo marka la adeegsanayo inta badan si aan sax ahayn oo aan haboonayn loo isticmaalo isla markaana aan loo adeegsan meesha ay ku habboon yihiin oo ay macnaha buuxa ku samaynayaan. Xanuun iyo cudur waa laba eray ama magac oo kala duwan kalana miisaan weyn isla markaana leh macnayaal kala jaad ah. [Read more…]
Filed Under: Blog, Health and Disease
Fahamka Guud ee Caafimaadka iyo Xanuunka
Fahamka caafimaadka iyo xanuunku waa muhiim waxaana haboon in laga warqabo. Ka hor intay naan bilaabin lafo gurka, gorfaynta iyo falanqaynta maaddooyinka iyo mawduucyada caafimaadka. Waxan guudmar kooban ku samayn doonnaa sharraxaadda iyo qeexitaanka erayada muhiimka ah iyo iftiiminta adeegsiga erayada qaar kood, si aan ugu isticmaallo mawduucyada iyo meelaha ay ku habboon yihiin innaga oo ka eegi doonna dhinaca luuqadda afka Soomaaliga iyo cilmiga sayniska caafimaadkaba.